စံပယ်ပန်း: October 2010
ဘလော့အတွက်စာအရှည်ကြီးတွေ မရေးနိုင်တာ ကြာပြီဗျာ..။ စာမရေးနိုင်တဲ့အတူတူ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျောင်းထဲသွားပြီးရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေပဲ ဘလော့မသေအောင်တင်ထားလိုက်ပါဦးမယ်..။
ဒါက Lee Wee Nam Library ရှေ့မှာ အမှတ်တရ..။ Library က အဲဒီနေ့က တနင်္ဂနွေမို့ ပိတ်ထားလို့ အထဲမှာဝင်မရိုက်ခဲ့ရဘူး..။
ဒါက ဘဘ Tan Chin Tang ရုပ်တုပုံနဲ့..။
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့ရိုက်ချင်နေတာကြာပြီ..။ သူက ဒီနေ့မှအားလို့.. ၊ အရိုက်ခံလို့ အခုမှတင်ရတယ်..။
တော်ပြီဗျာ..တင်ချင်တော့ဘူး..။ စိတ်တိုနေတယ်...။ တော်ပြီ..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 10/24/2010 09:36:00 pm0comments
ဘလော့မရေးနိုင်တာကြာပြီ..။ Assignment တွေက တစ်ခုပြီးတစ်ခု..။ Assignment က Blog, Wiki, Vlog , Facebook စတာတွေနဲ့knowledge ကို ဘယ်လို share လုပ်နိုင်သလဲဆိုတာကိုယ်ကြိုက်တဲ့တစ်ခုရွေးပြီး Individual တစ်ယောက်ချင်းစီ တင်ရမည်..။ ၁၈ ရက်နေ့အပ်ရမည်..။ Blog ကိုရွေးလိုက်သည်..။ကော်ပီကူးလို့မရတော့ ကိုးကားပြီး လိုသလိုပြန်စီစဉ်ကာ ရေးရမည်..။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားသောအကြောင်းအရာမို့ ရေးရတာ စိတ်ပါသည်..။ ခုမှစကာစရှိသေးသည်..။ ကြိုးစားပြီးရေးလိုက်ဦးမည်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 10/13/2010 11:36:00 pm0comments
"How to Prepare for Exam?" A big question that you always ask yourself. Here are some tips that may help you. Dear student friends you people may be of different types. I know many of you, no all of you are so brilliant students.Yet there may be some problems regarding your studies Let's discuss it here.Many of you may be working hard and getting good marks and some of you may not be working hard but still manages to get high marks in exams,Others may be wondering how it happens?.And also there will beafew of you study well but still not able to score well in exams.Don't worry there are some very simple tips by following which you can become master. These tips will tell you 'How to prepare for Exams in Short time', 'How to prepare forahigh school exam' as well asacompetitive exam and even you can prepare for exams inaweek just by following these tips. It will be even better if you follow this foralong period of time.
http://hubpages.com/hub/Tricks-to-tackle-exams မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 10/05/2010 10:39:00 am0comments